User talk:Phyo WP - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၂ may I change "Template:Wel-come" picture with png instead of jpg?
may I change "Template:Wel-come" picture with png instead of jpg?[ပြင်ဆင်ရန်]
user တော်တော်များများမှာ ပါတတ်တဲ့ Template:Wel-come ရဲ့ welcome smiley မှာ ကောင်းသော်လည်း ဟောင်းနွမ်းနေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒီ website မှာ ရှိတဲ့ smiley ပုံကိုယူပြီး welcome to wikipedia! စာနဲ့ ကိုယ်တိုင်စာရိုက်ထားပါတယ်။ ပုံက png file နဲ့ ဆိုတော့ ပုံကဟောင်းနွမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ smiley ပုံလေးနဲ့ စာ အပါအဝင် size ကတော့ 427 x 281 အရွယ်ပါ။ အဲဒီပုံအသစ်လေးကို Template:Wel-come ထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ သမီးမသိပါဘူး။
welcome smiley ကို Researcher က တင်ထားမှန်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝီကီရဲ့ Template:Wel-come ပုံလေးကို အသစ်ဖြစ်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ ပုံအသစ်တင်ချင်လို့ပါ။ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သမီးတင်လိုပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:Phyo_WP&oldid=426478" မှ ရယူရန်